Characteristics of Sharp Women | The World of Pinkgold
strike on March 31, 2009 at 6:02 am said:
Wow!!တွေရော၊တွံ သင်တို့သည် ဂဏှာဟိ မှတ်လော့ တွေရောဆိုတော့
နဲနဲလန့်လာလို့ ဘာမှန့်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး၊လူအရှိန် လွန်သွားတာပေါ့ကွယ်
zt on March 31, 2009 at 7:52 am said:
ထက်မြက်သူ ဆိုသည်မှာ မြက်ရိတ်လျှင် ရွှပ်ကနဲ ရွှပ်ကနဲ ပြတ်အောင် ဖြတ်နိုင်ရမည်။ 😛
အဇ္ဈတ္တပြခန်း on March 31, 2009 at 3:08 pm said:
ဖတ်ရတာတော့ အတော်အားရစရာကောင်းပါတယ်.. အဲဒီလိုမိန်းမမျိုးတွေဟာ ကျောက်စာနှင့် ထွင်းထုလောက်အောင် မှတ်သားထိုက်ပါပေတယ်.. သို့ပါသော်လည်း.. မိန်းမတို့၏ ပင်ကိုယ်ဗီဇတွေက ထက်မြက်ရင် အတ္တကြီးပြီး.. သဘာဝကို ဇောက်ထိုး မြင်တတ်ကြတာများတယ်ဗျာ… ဥပမာ ဖွားစော တို့လိုပေါ့ သမိုင်းတွင်အောင် ထက်မြက်ပေမယ့်.. သူ့ရဲ့ဗီဇဖြစ်တဲ့ သွေးက ပြောင်းလဲလို့မရတာတွေ့တယ်.. သူ့ရေးခဲ့တဲ့ကျောက်စာမှာ.. ဗီဇသဘောတို့ကို ဖော်ပြနေသလိုမျိုး ဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျ… ပိုစ်ရေးသားမှူကောင်းပါတယ်. ကျနော် သုံးသပ်ကြည့်တာ ပိုစ်ကိုမဟုတ်ပါဘူး… သဘာဝထဲက ကျနော်တွေးမိသမျှ မိန်းမတို့ရဲ့ အကြောင်းတရားကိုပါ..
pp on March 31, 2009 at 11:34 pm said:
အမရာ ကိန္နရီ မဒီ သမ္ဗူလ တော်လေးဝ မုချ မမှီပါ ။
မသက်ဇင် on March 31, 2009 at 11:48 pm said:
သိပ်ချစ်တဲ့ချစ်သူက ထက်မြက်လွန်းတဲ့ မိန်းကလေး—-
ဆိုပြီး စွန့်ပစ်သွားတာ လည်း မြင်ဘူးပါတယ်—-
cuttiepinkgold on April 1, 2009 at 2:14 am said:
ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမတွေဟာ မနကြီး အတ္တကြီးကြပြီး တစ်ဖက်သတ်ဆန်လွန်းကြတာတော့ မှန်တယ်။ မမသက်ဇင် ပြောသလို ချစ်သူက ထားခဲ့တာမျိုးလည်း တွေ့ဘူးတယ်။ ထက်မြက်လို့ အနားမကပ်ရဲတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးလည်း ကြုံဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးသားရတာက တစ်ဖက်မှာ ထက်မြက်နေပေမယ့် တစ်ဖက်မှာ ချို့ယွင်းနေရင် ပျော်ရွှင်မှုကို အပြည့်အ၀ မရဘူးဆိုတာ သိစေချင်လို့ပါ။ အရာရာကို သမအောင် မျှတတတ်ဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ်လည်း အဲ့လိုပဲ ဖြစ်ချင်တယ်။ ပင့်ဂိုလ်းတို့ကတော့ ဘာကောင်မှ မဟုတ်ပါဘူး. ဒါပေမယ့် ထက်မြက်တွေ မိန်းကလေးတွေများ ဒီစာလေး လာဖတ်ကြမလား လို့ပါ..
ကိုရင်နော် on April 2, 2009 at 2:47 am said:
လိုချင်ပါသည်.. တကယ်ကို လိုချင်ပါသည်..။း)
မိုးခက်နွယ် on April 2, 2009 at 7:15 pm said:
“မွှေလို့ မ၀သေးတဲ့” ကိုသားစိုး ဆီမှာ
cuttiepinkgold on April 3, 2009 at 2:28 am said:
တော်ကြာ သားစိုးဆီက မသင်ပဲနဲ့ သားစိုးပါ ရောပြီး အမွှေခံလိုက်ရမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေအုံးမယ်
MYO HAN HTUN on April 3, 2009 at 4:14 am said:
ရေးထားတာတွေကတော့ အပျံစားပဲ ..
mmthinker on April 12, 2009 at 9:00 am said:
အဲလို အမျိုးသမီးမျိုး တစ်ယောက်ပဲ တွေ့ဖူးသေးတယ်။
ဒေါက်တာ စန်တီတာ တဲ့။
ကံဆိုးချင်သော အဲဒီ ပါမောက္ခ လင်မယားက ကလေး မရဘူး။
ခွန်မြလှိုင် on April 13, 2009 at 8:52 am said:
နံပါတ် ၈ ကို နည်းနည်း ဖြည့်ချင်လို့… ခေတ်မီပြီး အတွေးအခေါ်တွေ ရှင်သန် ထက်မြက် နေတာက စာဖတ်လို့ တင် မကဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သေသေချာချာ စေ့ငုပြီး လေ့လာအား ကောင်းတာရယ် ၊ အစဉ်အလာ ဓလေ့ ထုံးစံ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တွေထဲကနေ ဖောက်ထွက် တွေးခေါ် စဉ်းစားတတ်လို့ ရယ်ကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ksanchaung on April 20, 2009 at 3:04 pm said:
ထက်မြက်သော ယောက်ျားဟူသည်ကား မိန်းမရှေ့၌ မခုတ်တတ်သော ကြောင်သူတော်ကဲ့သို့ ပြုမူ၍ ကာရာအိုကေနှင့် ဘီယာဆိုင်များ၌ ပျော်သောသူများဖြစ်ကြောင်း “ဂလုဂလု” နားနှင့်မနာ၊ ဖ၀ါးနှင့်နာ၍ သင့်ခေါင်း၌ သံမှိုနှက်သကဲ့သို့ စွဲမြဲစွာ မှတ်လော့။